Global Voices teny Malagasy » Indranteny Yorùbá: Ny fomba fivoaran’ny fiteny · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Janoary 2020 5:06 GMT 1	 · Mpanoratra Aremu Adeola, Jr. Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Afrika Mainty, Nizeria, Fanabeazana, Fiteny, Foko sy Fiaviana, Hevitra, Mediam-bahoaka, Tantara, Zavakanto & Kolontsaina
Àkàrà na mofo tsaramaso Nizeriana sakafo maraina any Nizeria, 11 Jolay 2013. Saripikan'i Atimukoh via Wikimedia Commons, CC BY 2.0.
Efa anjato taonany marono mifandray ny fiteny. Eritrereto anie ny voambolana “restaurant,” nindramina avy amin'ny fiteny frantsay ho amin'ny fiteny anglisy. Ankehitriny, ity indranteny  — voambolana noraisina avy amin'ny fiteny iray mankany amin'ny fiteny iray hafa tsy nasiana fandikanteny — ity mivezivezy amin'ny teny anglisy tahaka ny hoe tsy nindramina.
Azo lazaina ho avy amin'ny fifindramonina, varotra, ary fifampiraharahana ireny findramana ara-pitenenana ireny, satria misedra tontolom-pitenenampoko maro ny olona. Avy amin'ireny fifaneraserana ireny ny olona no mandalo tontolom-piteny isankarazany, sy fiteny sy fehezanteny nindramina handraisana ireo mpifanerasera aminao.
Tsy manivaka amin'izany ny Yorùbá. Ifampiresahan'olona manodidina ny 40 tapitrisa ao Nizeria,nandray tarakevitra avy amin'ny fiteny anglisy ifampiresahan'ny Britanika, izay nihazona fahefam-panjanahantany tao Nizeria nanomboka ny taona 1914 ka hatramin'ny taona 1960, ny fiteny Yorùbá.
Mihoatra ny antsasaky ny voambolana ampiasaina amin'ny fiteny Yorùbá no nindramina avy amin'ny teny anglisy. Eritrereto ny voambolana “cup.” nofehezina ho lasa kó̩ò̩pù. Ny voambolana “phone” lasa fóònù, “ball” lasa bó̩ò̩lù, ary ny “television” lasa te̩lifís̩ó̩ò̩nù, ankoatra ireo maro hafa.
Niitatra nandritra ny taona maro ireo voambolana anglisy izay “nampindramina” ho amin'ny fiteny Yorùbá ireny. Misy ihany koa ireo trangam-piteny Yorùbá nindramina avy amin'ny fiteny Hausa, ifampiresahan'olona 44 tapitrisa any amin'ny faritra avaratr'i Nizeria. Io fiteny izany nindrana betsaka avy amin'ny fiteny arabo, ihany koa, tahaka ny voambolana àlùbáríkà (“fitahiana”), àlùbó̩sà (“tongolo”) ary wàhálà (“korontana”).
Ny hamevan'ny indrateny Yorùbá dia ny fampiasana azy ireny amin'ny resaka andavanandro tahaka ny hoe efa voatelin'ilay fiteny izy ireny. Tsy vitsy ny mande olona miteny hoe, Bá o̩mo̩ ye̩n mú bó̩ò̩lu è̩ na “Ampio ny zaza handray ny baolina”. Na dia tsy zanatany amin'ny fiteny Yorùbá aza ny voambolana voatsipika ambany hoe bó̩ò̩lu, dia manao izay mampety izany ireo mpiteny azy.
Iray amin'ny fanamby (olana) amin'ny fiteny Yorùbá raha eo amin'ny indranteny dia ny fitiavan'ireo mpiteny azy mandika ny voambolana Yorùbá ho amin'ny teny anglisy sy ny fampiasana ireny ao anaty fehezanteny misolo ny voambolana Yorùbá ôrizinaly. Ohatra iray amin'izany ny voambolana àkàrà — maro amin'ny mpiteny Yorùbá no mandika azy ho mofo tsaramaso eo amin'ny fifaneraserana andavanandro —, indrindra rehefa amin'ny vahiny.
Ny fampiasana voambolana amin'ny endriny nahafantarana azy no miantoka fa mbola ao tsara ilay kolontsaina — velona amin'ny alalan'ny fiteny — . Ohatra raisina amin'izany, tsy misy olona any Japana ka manonona ny sushi amin'ny anarana hafa — rehefa sushi dia sushi.
Rehefa izay no mitranga amin'ireo voambolana Yorùbá maro, dia afa-mamelana mihoatra an'i Nizeria sy ny tontolo mpiteny Yorùbá ihany koa ilay fiteny sy ilay kolontsaina. Ohatra, ny àmàlà dia sakafo Yorùbá malaza, eny fa na any amin'ireo ampielezana aza. Mety mahita ny lalany any amin'ny rakibolan'ny teny hafa io voambolana io raha mikiry manonona azy ny mpiteny Yorùbá. Mampihena ny satany sy ny fototra ara-pitenenana azy ny mandika azy ho “yam flour” — mampihena ny maha-“Yoruba” azy.
Eritrereto indray ilay voambolana Yorùbá natao teny anglisy ho “fanimorious,” izay lasa mihamalaza ahy hita ao amin'ny rakibolana an-tanandehibe. Ny dikany dia hoe “sariaka,” na “meva,” ary avy amin'ny voambolana hoe fanimó̩ra amin'ny teny Yorùbá izany.
Mety ho ara-panononana sy araka ny endriky ny teny izany: tsy mety amin'ny fiteny Yorùbá ny mamarana voambolana amin'ny vaninteny renintsoratra na amin'ny renintsoratra. Vokatr'izany, nampiana tamin'ny fototeny Yorùbá ny tovana anglisy -ious. Na izany aza, hita ihany fa mbola mitoetra hoe avy amin'ny fiteny Yoruba ilay voambolana. Fandresena izany ho an'ny fiteny Yorùbá.
Vao haingana izao no nampiana  tamin'ny Rakibolana anglisy Oxford ny voambolana anglisy nizeriana maro hafa.
Hahavita dingana lehibe ny Yorùbá rehefa mandray anjara amin'ny fanabeazana ny vohon'ny teny ny mpiteny azy; zavadehibe ihany koa ny mampiasa azy amin'ny fampitam-baovao satria efa miha-nomerika kokoa hatrany ny fampitam-baovao. Ho vokatr'izany dia hiteraka fikarohana bebe kokoa amin'ilay fiteny Niger-Congo izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/01/27/146680/